Isimo sezulu sePyrenees: izici, ubusika namahlobo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isimo sezulu Pyrenees
Namuhla sizokhuluma ngesimo sezulu samaPyrenees. Yindawo esezintabeni lapho isimo sezulu siyintaba. Okusho ukuthi, inezici ezisemqoka njengamazinga okushisa aphansi ngokujwayelekile nenani elikhulu lemvula. Yize isimo sezulu sentaba sinalezi zici cishe kunoma iyiphi indawo, sizongena ngokujula kancane ku- Isimo sezulu sasePyrenees ngoba kukhona ezinye izici nezici zazo.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici kanye nesifiso sesimo sezulu sePyrenees.
2 Isimo sezulu iPyrenees, isimo sezulu esiyingqayizivele
3 Isimo sezulu sePyrenees: ubusika obumanzi nehlobo elomile
Enye yezinto okufanele ibhekwe uma kuchazwa lolu hlobo lwesimo sezulu maqondana nesinye isimo sezulu sentaba indawo okuyo. Njengoba iPyrenees ingumngcele wemvelo kanye nomngcele wesimo sezulu phakathi kwe- ulwandle olwandle futhi i ULwandle iMedithera, inezici ezihlukile. Kumele sikhumbule ukuthi isimo sezulu se-Atlantic sihlukile, kepha futhi nesimo sezulu saseMedithera njengoba sinjalo. Isimo sezulu sePyrenees siyehluka ngokuya ngesimo. Engxenyeni esenyakatho-ntshonalanga yisimo sezulu esifana kakhulu nesase-Atlantic, kanti ngaseningizimu-mpumalanga kuyisimo sezulu saseMedithera.
Ngendlela ebonakalayo, lokhu sikuhumushela ekwahlukaneni kwesimo sezulu lapho kwehla khona imvula lapho siseningizimu mpumalanga. Okungukuthi, amaPyrenees aseCatalan futhi izigodi zangaphambi kwePyrenean yisifunda esome kakhulu esitholakala kwisimo sezulu sasePyrenees sonke. Kodwa-ke, kufanele sikhumbule ukuthi kunezindawo ezithile ezinjengeCanigó ne-Olot ezijwayele ukuba nemvula eningi edalwa umoya omusha ofanele.
Ngokuphambene nalokho, kunezinye izindawo zasePyrenean eziseduze nezwe laseBasque. Lapha sinendawo yonke esentshonalanga ye-Aragon neNavarra, eseduze kakhulu ne-Atlantic Ocean kanye neGulf of Gascony. Lokhu kuveza imvula eningi ngokungaguquguquki nendawo epholile njengoba kunomswakama omningi. Lokhu kushisa kugcinwa kungaphansi futhi umswakama uhlala uphakeme unyaka wonke, ngisho nasehlobo. Ngenxa yokuphakama kwezintaba, lezi zimo zitholakala kuphela emithambekeni esenyakatho yezintaba. Ngakolunye uhlangothi, izinsalela zokuphazamiseka ezivela e-Atlantic Ocean kuphela ezifika emthambekeni oseningizimu. Sinemimango yokuphazamiseka esevele ibuthaka ngenxa yohambo lwabo kuyo yonke inhlonhlo.
Lapho lokhu kuphazamiseka kufinyelela ePyrenees, eziningi zazo zivuselelwa futhi ziphinde zikhiqize imvula eningi. Isibonelo, uma sibala indawo yase-Aragonese Pyrenees, siyabona ukuthi izimvula ziyancipha njengoba siya eningizimu. Nakhu ukuthi ezigodini zase-Ansó sithola imvula enkulu kangakanani.
Isimo sezulu iPyrenees, isimo sezulu esiyingqayizivele
Esigodini saseCerdanya sithola isimo sezulu esithile. Futhi yisigodi esinamahora amaningi okukhanya kwelanga kulo lonke elaseYurophu. Sikhuluma ngamahora angaphezu kwama-300 okukhanya kwelanga ngonyaka, lapho sazi khona ukuthi isimo sezulu esihle sihamba phambili. Yize kuyindawo esezintabeni, inesikhathi esimnandi kakhulu. Kuyisimo sezulu esithile esivumela ukuthi amasimu ahlukahlukene akhule kulezi zindawo, uma kwezinye izindawo endaweni ephakeme engacabangeki. Lokho kusho ukuthi, iyakwazi ukuthuthukisa uhlaza noma ngabe sisekuphakameni lapho bekungeke kube kwenye indawo yezintaba.
Yize amahora okukhanya kwelanga ehamba phambili, siphinde sibe nehlobo lapho kunezimo ezithile zezulu ezingezinhle. Kulula ukuthi ehlobo ingaba neziphepho ngokuduma kwezulu nombani. Iqiniso elinqatshelwe ukwazi ngesigodi saseCerdanya ukuthi ebusika kunezikhathi lapho ingxenye engezansi yalesi sigodi ibanda khona ngaphezu kwesiqongo sezintaba. Ingabe mayelana ukusuka ezimweni ezibandayo kuya emhlabathini ophansi ngenxa yokuphakama kanye nokuhlangana phakathi kwemisinga yomoya.
Isimo sezulu sePyrenees: ubusika obumanzi nehlobo elomile
Izici ezimbili eziyinhloko zivelele esimweni sezulu sePyrenees: ubusika obumanzi nehlobo elomile. Ngaphandle kokuthi ukungena komoya oswakeme ukusuka enyakatho uye eningizimu kubanzi impela, lesi simo senziwa kakhulu ngesikhathi sasebusika kunasehlobo. Siyazi ukuthi ehlobo ukuqondiswa komoya kuyahlehla kusuka eningizimu kuye enyakatho, yingakho ama-anticyclone avela eMedithera evelele. Lawa ma-anticyclone akhulisa izinga lokushisa futhi enza isimo sezulu somile. Isimo sezulu esihle futhi sidlangile futhi izintaba zasePyrenees zithola amahora amaningi elanga ngaphandle kwamafu.
Iqiniso lokuthi ehlobo awekho amafu amaningi kangako lidala ukuthi izinga lemisebe yelanga libe phezulu kakhulu. Lokhu futhi kubeka ukuthuthukiswa kwezinhlobo ezahlukahlukene zezimila nohlaza badinga ukukhanya kwelanga amahora amaningi ngosuku.
Ngokufanayo nemvula, izinga lokushisa nalo liyathuthuka njengoba siya eningizimu. Ngalo mqondo, singasho ukuthi kubantu abahlala ezintabeni eziseningizimu yePyrenees bayisihlangu esifanele sokuzivikela ezimweni ezimbi nasesimo sezulu esibi. Lezi zimo ezingezinhle zivela enyakatho ziqonde ngqo e-Atlantic Ocean noma enyakatho yeYurophu.
Kukhona futhi umehluko wesimo sezulu sePyrenees lapho sihambela emthambekeni ngamunye ngokokuma kwawo. Leyo mithambeka ibheke enyakatho zivame ukuba namazinga okushisa aphansi kanye nenani elikhulu lemvula, kokubili imvula neqhwa. Ngakolunye uhlangothi, uma sihlaziya umthamo ongaseningizimu, siyabona ukuthi amazinga okushisa afudumele ngokuphawulekayo futhi nenani lemvula liyancipha. Lokhu kusho ukuthi yonke imithambeka ebheke eningizimu imvamisa igcwala kakhulu izilwane nezimila zasePyrenean.
Izimo zokushisa, umswakama, umbuso womoya, imisebe yelanga, zakha izici ezihlukile zalolu hlobo lwesimo sezulu esiphakathi koLwandle iMedithera noLwandle i-Atlantic. Ngalesi sizathu, iyindawo eyingqayizivele hhayi kuphela ngenxa yesimo sezulu, kepha futhi nangenxa yokuthi kukhona izitshalo nezilwane kuphela.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngesimo sezulu sePyrenees nezici zakhona.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isimo Sezulu » Isimo sezulu Pyrenees